Daawo-: South Africa oo lagu gubay goobo ganacsi oo ay soomaali leedahay – Hornafrik Media Network
Daawo-: South Africa oo lagu gubay goobo ganacsi oo ay soomaali leedahay
By Liban Abdullahi	 Last updated Aug 3, 2017
Johannesburg-Horafrik- Dr Maxamed C/laahi Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka South Africa oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay ay ka waalacsan yihiin weeraro ku soo kordhay ganacsatada Soomaalida ku nool dalkaasi.
Jaaliyadda Soomaalida ayaa soo bandhigay muuqaalka iyo qasaaraha weeraradii 31-kii Jully lagu qaaday goobo ganacsi oo ay soomaali leedahay, waxa ayna u tacsiyadeeyay dadkii halkaasi ku dhintay.
weerarkaan oo loo adeegsaday dhalooyinka basiinka lagu shubo ee loo yaqaano “Padrol Bamb” aya waxaa ku geeriyooday alle ha u naxariiste muwaadiniin soomaali ah oo lagu kala magacaabo Cali Maxamuud Cali, Cabdullaahi Cali Caymooy.
Ganacsatada soomaalida ah iyo ganacsigoda ayaa si gaar loogu bartilmaameedsadaa dalka south Africa iyadoo Doowladda dalkaasi aysan wax muuqdo arinkaasi ka qaban.
Liban Abdullahi is creative editor, activist, former professional Radio journalist and senior member of MMH, currently freelancing online news sites and magazines specialized in Editorial and content roles.
Kulankii Baarlamaanka oo u baaqday Kooram la’aan.
Jabuuti oo xaqiijisay in askar ka tirsan ciidamadeeda cirka ay ku geeriyoodeen shil diyaaradeed oo ka dhacay dalkaasi